Pfungwa inoratidza kuti iyo iPhone 7 Yakadzika Bhuruu ingave | IPhone nhau
Pfungwa inoratidza kuti iyo iPhone 7 Yakadzika Bhuruu ingave sei
Chishanu chekupedzisira takadzokorora yeruzivo, yakaburitswa mukati meMac Otakara svikiro, iyo yakavimbisa kuti Apple icharega kugadzira iyo iPhone Space Grey kuti ipe nzira kucara. Deep Blue. Chinhu chekutanga chandingade kutaura nezvacho ndechekuti hazviite zvine musoro kwandiri kuti vari kuzobvisa rumwe rwemavara mashoma anowanikwa nemidziyo yeIOS. Kune rimwe divi, zvinoita kunge zvingangoita uye zano rakanaka kuburitsa zvishandiso mumavara matsva, senge rebhuruu, yero kana tsvuku.
Sezvataona kare pazviitiko zvakasiyana, Martin Hajek hazvina kutora nguva yakareba kugadzira concepto izvo zvinotiratidza nenzira yakadzama kuti iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Uyezve Yakadzika Bhuruu kana Dark Blue, sezvaakadaidzawo kuti. Pamusoro peiyo nyowani ruvara, pfungwa yayo nyowani inoratidza zvese zvatinoziva nezve iri kuuya Apple smartphones: akakura makamera, kuve maviri mune iyo Plus modhi uye hombe uye padhuze kumucheto mune 4.7-inch modhi, kusavapo kwehedhifoni chiteshi, Smart Chinongedzo pane iyo iPhone 7 Plus uye mitsara yeiyo antenna inongowanikwa chete kumusoro uye nechepazasi kumucheto, asi kwete zvichipesana.
iPhone 7 Yakadzika Bhuruu
Chinhu chakashata chevashandisi vazhinji ndechekuti, kunze kweshanduro dzambotaurwa, iyo iPhone 7 / Plus ichave iri yakapotsa yatsvaga kune iyo iPhone 6 iyo, sekuziva kwako, yakapihwa munaGunyana 2014. Chinhu chakanaka, maererano nerunyerekupe, Ichave irimukati, sezvo ese ari maviri makamera achavandudza zvakanyanya eiyo iPhone 6s, ivo vanozove neanowedzera uye anoshanda A10 processor, pachave ne256GB sarudzo uye ivo vanozove ne3GB ye RAM. Kunyangwe isu tichiri kufanira kumirira kuratidzwa kwayo, tinogona kufunga kuti iyo iPhone 7 ichasanganisira mashoma maficha nekuti shanduko dzinotarisirwa mu iPhone inoshandura kuverengera kwayo, asi kusvika zvino tanga tave neyakagadziriswazve dhizaini. Apple ichazvipfura pachetsoka gore rino nekuda kwekunamatira nedhizaini?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Concepts » Pfungwa inoratidza kuti iyo iPhone 7 Yakadzika Bhuruu ingave sei
BMW inotsigira CarPlay mune iyo M3 uye M4 renji
Hacker inoratidza Flying JB, jailbreak yeIOS 9.2.1